Suuqa maalgashiga kale: lacagaha | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Suuqa maalgashiga kale: lacagaha
Kahor degenaansho la’aan taas oo laga soo saari karo suuqyada sinnaanta qeybtan hore ee sanadka, lacagaha waxaa loo sameyn karaa inay ka duwan yihiin maalgashiga maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Marka la eego, waa in la xusuusnaado in warbixintii ugu dambaysay ee Ebury ay muujisay in "ay tahay wax la yaab leh in waxqabadka doolarku uu ku dhex milmay lacagaha waaweyn ee suuqyada soo baxaya, kuwaas oo in badan oo ka mid ahi ay wax badan ka fiicnaadeen soo noqoshada USA, maadaama cabsiyi saamaysay dhaqaalaha adduunka wuu yaraanayaa ”.
Hawlgallada ka socda suuqyada sarrifka ayaa ka dhib badan maxaa yeelay way dhakhso badan yihiin. Waa hanti maaliyadeed taas waxay ku kala duwan yihiin qiimahooda si joogto ah. Iyada oo xoog leh oo awood u siineysa faa'iidooyinka raasumaalka waaweyn in lagu helo saacado yar gudahood. In kasta oo isla sababtaa, waxay ku qaadaysaa khatar aad u weyn dhaqdhaqaaqyadeeda waxayna u baahan tahay barasho ballaadhan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Halka mid ka mid ah furayaasha lagu sameyn karo maalgashiga ay tahay in la ogaado isbeddelada lacagaha. Tusaale ahaan, inta udhaxeysa dollarka iyo euro.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu khuseeya maalgashigan ayaa ah ka dhashey sarrifka lacagaha ee u baahan guddiyo badan oo dalbanaya ka badan waxyaabaha kale ee maaliyadeed. Sababtaas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in si cad loo caddeeyo xilliga gelitaanka iyo bixitaanka ee suuqyada lacagaha. Layaab malahan, kharashka hawlgaladan waxay kudhowaad labanlaaban karaan hantida kale ee maaliyadeed, sida iibsashada iyo iibinta saamiyada suuqa saamiyada. Iyadoo loo marayo suuq lagu tilmaamo dabacsanaantiisa iyo isbeddelkeeda weyn. Kala duwanaansho ballaaran oo u dhexeeya qiimaha ugu sarreeya iyo kan ugu yar.
1 Lacagta: euro ee xarunta
2 Warar sugan oo ku saabsan doolarka
3 Pox Brexit oo sugaya
Lacagta: euro ee xarunta
Ku dhawaaqida in Christiane Lagarde ay noqoneyso madaxweynaha cusub ee ECB waxaa loo tarjumay warka sii socoshada iyo, laga yaabee, dhexdhexaadka siyaasada lacagta, warbixinta Ebury ayaa tilmaamtay. Meeshii ay ku caddaatay in suuqyadu si dhab ah u arkeen sidan, maaddaama bonds Talyaani si xoog leh isu soo uruuriyay iyo euro waxay bilaabeen inay lumiyaan xitaa ka hor warbixinta mushahar bixinta Mareykanka ee la sii daayay Jimcihii.
Intaa waxaa sii dheer, aragtida Ebury, go'aanka Midowga Yurub ee ah in aan lagu dabaqin cunaqabateynta ka dhanka ah talyaaniga miisaaniyadeeda dhimista waxay muujineysaa aragti dulqaad leh oo ku saabsan kicinta maaliyadeed ee dheeri ah. Tani waxay ka dhigan tahay, sida laga soo xigtay Ebury, hoos u dhigista lacageed ee dheeraadka ah waxay noqon kartaa mid aan loo baahnayn, taas oo ku habboon euro muddada dhexe. Si kastaba xaalku ha ahaadee, wax waliba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in lacagtani ay noqon doonto mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon hantidan maaliyadeed ee muhiimka ah. Meesha ay suurtagal tahay oo keliya in la caddeeyo taas oo ah isbeddelka hawlgallada lagu fulinayo: dollar, Swiss franc, Japanese yen, iwm.
Warar sugan oo ku saabsan doolarka
Toddobaadkii hore war wanaagsan oo ku saabsan ganacsiga ayaa Jimcihii hadheeyay warbixin aad u xoog badan oo mushahar bixineed ah oo ka dhacday Mareykanka, sida lagu xusay daraasadda Ebury. Meeshii laga helay abuurista shaqadu inay si xoog leh u soo kabatay tan iyo markii ay dhacday dayrtii sanadkii la soo dhaafay, mushaharka dhabta ahi wuxuu ku sii soconayaa inuu si tartiib tartiib ah u koro. Ma jirto wax tilmaamaya inay jirto hoos u dhac dhaqaale ama xitaa gaabis weyn. Warbixinta kadib, suuqyadu waxay umuuqdeen inay meesha ka saarayaan suurtagalnimada in 50 qodob oo dheeraad ah laga jaro kulanka guga. Federal Reserve. In kasta oo aan u maleyneyno in jaritaanku yahay mid aan laga fogaan karin siyaasad ahaan, haddana ma aragno shuruudaha meertada goynta joogtada ah.
Mid ka mid ah furayaasha lagu hagayo lacagtan caalamiga ah ayaa ah go'aanka ay qaadan karto hay'adda lacagta ee Mareykanka (FED). Macnaha haddii ay kor u qaadi doonto dulsaarka aaggan dhaqaale iyo in kale ayaa sidoo kale go'aan ka gaari doonta isbeddelka suuqyada sinnaanta adduunka. Halkee, iyada oo ku xidhan go’aanka la gaadhay, waxaad u mari kartaa dhinac ama jid kale. Lama iloobi karo in Doolarka Mareykanka uu ka mid yahay lacagaha ku jira halkaasoo boosas badan laga furayo maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Iyadoo leh mug ganacsi oo aad u sarreeya kana sarreeya inta kale ee lacagaha.
Pox Brexit oo sugaya
Pound Sterling waa mid kale oo ka mid ah lacagaha ugu firfircoon suuqa adduunka. Marka la eego, warbixintii ugu dambeysay ee Ebury waxay muujineysaa calaamadaha sii kordhaya ee hubin la'aanta Brexit ay bilaabeyso inay saameyn ku yeelato kalsoonida ganacsiga UK. Tilmaamayaasha waxqabadka ganacsiga PMI waxay ka hooseeyeen heerka 50, oo tilmaamaya foosha. Toddobaadkan waxaan arki doonaa haddii kalsoonidani lumisay ay ka muuqato xogta dhaqaale ee dhabta ah markii Kobaca dhaqaalaha saddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa la dhihi karaa qalad la'aan inay ka mid tahay lacagaha ugu isbedbedelka badan. Kala duwanaansho aad u ballaaran oo ku saabsan qiimaha ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee u oggolaanaya in la fuliyo hawlgallada ganacsiga. Gaar ahaan, dhaqdhaqaaqyada ka soo baxay bixitaankii Boqortooyada Ingiriiska ee Midowga Yurub. Natiijo ahaan tan, waa run run in keydinta laga dhigi karo mid faa'iido leh haddii ay yaqaanaan sida loo hagaajiyo gelitaanka iyo bixitaanka boosaskooda suuqa sarifka lacagaha qalaad. Gaar ahaan isbeddellada ay ku sameysay lacagta euro-da iyo doolarka Mareykanka.
In kasta oo dhinaca kale, aan la iloobi karin in isbeddelka guud ee toddobaadyadii la soo dhaafay uu yahay soo kabasho cad oo doollarka ah oo laga yaabo inay ku siiso tilmaam aan caadi ahayn go'aannada maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. In kasta oo lagu jiro hawlgallo waqti-gaaban ah, oo ah muddada joogtada ah ee hawlgalladaas lagu jiheeyo. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa mid ka mid ah beddelka ay leeyihiin maalgashadayaasha tafaariiqda ah si ay uga dhigaan keydkooda faa'iido u leh qeybta labaad ee sanadka. Marka laga gudbo taxane kale oo tixgelin farsamo ah oo saameyn ku yeelan kara isbeddelada hantidan maaliyadeed ee muhiimka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Siyaasadda lacagta » Suuqa maalgashiga kale: lacagaha
Ma la joogaa xilligii dib loogu laaban lahaa suuqyada soo baxaya?
Qeybaha suuqa saamiyada Isbaanishka ee ay saameysay dowlada cusub